चम्किदैछ वृष, कर्कट, सिंह, तुला, धनु र मीन राशिको भाग्य, यो साताको राशिफल हेर्नुहोस् ! – hamrosandesh.com
चम्किदैछ वृष, कर्कट, सिंह, तुला, धनु र मीन राशिको भाग्य, यो साताको राशिफल हेर्नुहोस् !
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ): यो सातामा नगद सापटी लिएका आफन्तहरूले वचन पूरा नगर्दा आर्थिक झन्झट आइलाग्न सक्छ । गरेको काममा उल्टो परिणाम आइनपर्ला । मध्य साताबाट लामो समयदेखि रोकिएको कामबाट राम्रो रहला । रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । यो साताका लागि शुभ अङ्क ४,५ र शुभ रङ्ग सिन्दुरे वा कालो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विघ्नहर्ता गणेशजीको आरधना गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
वृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो): यो साता सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ । खेतिपातीबाट बढी लाभ लिन सकिनेछ । साताको अन्त्यमा स्वास्थ्यप्रति र बाटो काट्दा वा यात्रा गर्दा सचेत हुनुपर्छ । यो साताका लागि शुभ अङ्क ३,७ र शुभ रङ्ग ध्वाँसे वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा कार्य गर्नु अघि वरुण भगवानको स्मरण गरी कार्य आरम्भ गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा): यो साताको सुरुका दिनमा नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । व्यापार व्यवसायमा सफलता पाइनेछ । लामो समयदेखि रोकिएको कामको गाँठो फुक्नेछ । साताको मध्यमा नियमको अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दा अवसर र लाभ गुम्न सक्छन् । शुभारम्भको चर्चा पनि चल्नेछ । यो साताका लागि शुभ अङ्क ३,८ र शुभ रङ्ग खैरो वा हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व महादेवको आरधना गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो): यो साता एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइएला । नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनसक्छ । सामाजिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । यो धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । शैक्षिक क्षेत्र पनि राम्रै रहनेछ । साताका लागि शुभ अङ्क १,४ र शुभ रङ्ग सेतो वा पहेँलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विष्णु भगवानको दर्शन गरी आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे): साताको सुरुमा स्वास्थ्यमा गडबडी भई दैनिक कामकाजमा असर पर्नसक्छ । काम बिगार्नेको सक्रियता रहनेछ । सोमबारबाट चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । समाजसेवामा मन लाग्नेछ । लामो समय देखि रोकिएको अधुरो कार्यले पूर्णता पाउनेछ । यो साताका लागि शुभ अङ्क २,९ र शुभ रङ्ग कालो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट सफलता अधिक मिल्नेछ ।
कन्या (टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो): यो सातामा बिनाप्रतिस्पर्धा फाइदा हुने योग छ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । आदर्श ब्यक्ति सँगको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । बन्धु बान्धव बाट सहयोग पनि मिल्ला । साताको अन्त्यमा आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । यो साताका लागि शुभ अङ्क १,७ र शुभ रङ्ग खैरो वा रातो रङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको स्मरण गरी यात्रा गर्नाले सफलता मिल्नेछ ।
तुला (रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते): यो सातामा शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ । सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ । विश्वास गरेकाले साथ दिनेछन् । अतिथिको रूपमा सत्कार पईनेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ । वित्तीय संस्थाबाट सहयोग पाइनेछ । यो साताका लागि शुभ अङ्क २,५ र शुभ रङ्ग गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु): यो साता रमाइलो र छोटो यात्राको सम्भावना समेत छ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । दैनिक कार्यमा सफलता पाइनेछ । यो साताका लागि शुभ अङ्क २,७ र शुभ रङ्ग निलो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व श्रीकृष्ण भगवानको स्मरण गरी कार्य आरम्भ गर्दा शुभफल प्राप्त हुनेछ ।
धनु (ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे): यो सातमा दाजुभाइ, दिदीबहिनीले तपाईंका सकारात्मक विचारलाई समर्थन गर्नेछन् । पराक्रम बढ्नुका साथै धन लाभका योग पनि देखिन्छन् । प्रेम जीवन पनि सफल रहनेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ, तर स्वास्थ्य प्रति सजगकता अपनाउनु पर्नेछ । यो साताका लागि शुभ अङ्क ४,८ र शुभ रङ्ग सेतो वा पहेँलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको स्मरण गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
मकर (भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि): यो साता व्यवसाय बढाउने वा नवीन रोजगारीको योजना बन्नेछ । साथीभाई र आफन्तबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनसक्छन् । बुधबारबाट दैनिकी कार्यमा भने समस्या र अवरोध आउनेछ । शैक्षिक क्षेत्र पनि कमजोर रहनेछ । यो साताका लागि शुभ अङ्क ४,५ र शुभ रङ्ग कालो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको दर्शन गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा): यो साता बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ । समाजबाट सहयोग मिल्ने देखिन्छ । प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि पनि श्रेष्ठ समय रहेकोछ । साताको उत्तरार्धमा प्रतिद्वन्दी हरुले कार्यमा अवरोध ल्याउनेछन् । व्यापार व्यवसायमा वाधा आउनेछ । यो साताका लागि शुभ अङ्क ३,८ र शुभ रङ्ग खैरो वा निलो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व भगवतीको दर्शन गरी कार्य आरम्भ गर्दा सफलता मिल्नेछ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि): यो साता शुभकार्यको योजना र चर्चा चल्नेछ । महिला वर्गबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । धार्मिक तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । मध्य सातामा सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । मनमा निरासा र शरीरमा आलस्य आउला र स्वास्थ्य प्रति सजग रहन आवस्यक छ । यो साताका लागि शुभ अङ्क १,९ र शुभ रङ्ग घिउरङ्ग हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको दर्शन गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
(अधिक जानकारीको लागि ज्यो.प. नारायणप्रसाद दुलाल- ९८४९५५९५०२ )